Telefoonada gacanta ee $ 3 waxay ahaayeen been | Androidsis
Telefoonada casriga ah ee $ 3 waxay ahaayeen been
Cristina Torres sawir-haye | | Mobiles
Xaqiiqdii waad maqashay mid kamid ah mashaariicda maalmihii ugu dambeeyay faafayay. Waxay ahayd wax in badan oo ka mid ahi aan macquul ahayn, in kasta oo loo isticmaalay in lagu soo saaro saldhigyo jaban oo suuqyada soo koraya ah. Kuwa aan aad ugu dhicin baqbaqaaqyada shabakadaha bulshada, wuxuu ahaa taleefan lagu iibiyo $ 3 kaliya waxaana loogu talagalay suuqa Hindiya.
Caqli ahaan, $ 3 ayaa runtii sababay dareen badan maxaa yeelay waxay ahayd lacag aad u yar oo loogu talagalay taleefanka casriga ah, iyadoon loo eegin sida hoose-dhamaadka ay ahayd. Shirkadda, Ringing Bells waxay soo bandhigtay nooc ka mid ah dalabyada ay ku doonayso inay ku ururiso lacagaha oo ay u dhacdo. Hadda waxaan ognahay in taleefanka la yiraahdo Xorriyadda uusan jirin, oo dadkii fikradda ka qaybqaatay ay heleen taleefan, in kasta oo aan lagu qiimayn qiimaha la xayaysiiyay, ama shirkadda lafteeda. Waxay qeexaysaa haddii ay tahay khiyaano maxkamad la keeni karo ama haddii, taa bedelkeeda, waxaan tixraaceynaa olole dhiirrigelin ah oo ay ku lug leeyihiin arrimaha muranka dhaliyay.
Taleefanka ay ka heleen kuwa ka qayb qaatay maalgalinta gaarka ahi waxay ahayd Adcom Ikon 4s. Waa mobilo ay soo saartay shirkad kale sida ugu horreysa ee ay ku kala duwan yihiin $ 3 terminaal ah oo uu bixiyo fayraskan adduunka oo dhan maray. Intaa waxaa dheer, qiimaha qalabka, dhammeystirka iyo walxaha kale ayaa si aad ah uga sarreeya. Tani waxay abuurtay diidmo badan iyo xanaaq ka yimid kuwii iyaga aaminay.
Adcom laftiisa ayaa ka fikiri kara inuu qaado tallaabo sharci ah tan iyo markii, sida ay qirayaan, aan waxba lagu wargelin. Dhanka kale, Dhawaaqa Dawannada, soo saaraha Xorriyadda loo malaynayo weli waa la la'yahay oo wax hadal ah kama bixin.
Wadada buuxda ee maqaalka: Androidsis » Aaladaha Android » Mobiles » Telefoonada casriga ah ee $ 3 waxay ahaayeen been
Samsung Galaxy S7 Edge waa mobilada ugu fiican ee leh kamarada ugu fiican sida uu sheegayo DxOMark